Semalt Expert Inotsanangura A1 Website URL Scraper
Zuva rekutsvaga nzvimbo dzinosanganisira kuunganidza kana kukohwa ruzivo rwewebsite kune imwe nzvimbo yekuchengetedza motokari. Zvinokwanisika kutora data kubva pawebsite uye kuichengeta pane imwe nzvimbo inzvimbo uchishandisa A1 webhusaiti URL scraper. Iwe unogona kusanganisa uye unounza pamwe zvinhu zvakasiyana zvewebhuku rewebsite kuti uite zvakagadziridzwa zvekuchengetedza dhizha. Uyezve, unokwanisa kukonzera URLs kuti uone data uye kubudisa CSV pamwe neSquL mafaira - peterburi tee 71 kaartenhuis. Iwe unogona kutumira ruzivo urwu kumotokari yemunharaunda kana kuichengeta mune databata yakadai seSQL databases.
Iyi SEO nhungamiro ine mazano anokosha ekushandisa URL yewebhu yepa websaiti kubudirira.
Kuti utange, unoda kutora uye kuisa A1 webhusaiti ye URL URL scraper. Iyi software inoshandisa Windows OS yakafanana neWindows 10/8/7 / Vista / XP / 2008/2003 pamwe chete nemasikirwo eMac OS se macOS / OS X - Yosemite kana kuti itsva. Ichi chishandiso:
Ane download file file ye 6.09MB chete.
Shanduro 8.x haifaniri kubhadhara mari yekubhadhara.
Pane nguva yakakwana yekuedza kwemazuva makumi matatu ekuongorora kukosha kwayo.
Mutengo: $ 0 nokuda kwekushandurwa kwekusununguka pamwe ne $ 49 yevhidhiyo yemhizha.
Kune rusununguko rwemhando yezvigadzirwa kare uye mushure mokutenga..
Chimwe chinhu chinotonhora neA1 webhusaiti URL scraper ndechokuti kutenga uku kunotakura zvese zvinyorwa 8.x mberi. Uyezve, vanhu vanogona kukwanisa kuvandudza kune 9.x version chero nguva iyo inosunungurwa musati nguva ye1yr yapfuura.
Kubudisa webhusaiti yewebhu ne webhusaiti URL scraper
Munhu anokanganisa anogona kukwanisa kuita mabasa akawanda anobatsira paIndaneti. Izvi zvinosanganisira kuongorora nekudzikisa deta kubva kune zvinyorwa sefambi dzekufamba, mahotera, mashizha uye mamiriro ekunze. Vanhu vanogonawo kukwanisa kubatanidza zvakatsvaga webhusaiti yedhidha yehutano hwakasiyana-siyana hwekutsvaga kwedhigiridzo uye zvishandiso. Vanhu vanogona kukwanisa kutora zvinhu kubva kune imwe webhusaiti uye vanozvichengeta mumutauro unowirirana neshoko rako rekushandisa.
Yero website yeAraj scraper ndeyeti web spider web standard. Kana ichikwira, inogona kukwanisa kuita mabasa akawanda akadai sekutsvaga URLs. Iwe unogona kukwanisa kutarisa kukurumidza kwekukamba kuitira kuti iwe ugone kukwanisa kutora zvose zvese zvinokosha zvinodikanwa kusanganisira weboroji yewebsite.
A1 scraper inowanzoreva mazwi akawanda anokwanisa kuenderana nemhando ye data yaunoda. Iko kunewo mashandisi-anobatsira mashizha anobatsira pakuziva nzira iyo data iri kutarisirwa nayo. Iwe unogona kukwanisa kuumba mazwi anowanzodiwa emashoko aunoda.
Mukupedzisa, webhusaiti yeA1 ye URL URL scraper inogona kukwanisa kutora zvinyorwa zvewebsite kune zvaunoda. Kune zvakawanda zvigadziri kuburikidza nazvo zvaunogona kukwanisa kutengesa dheta kubva paURR scraper. Kunyanya, iwe unogona kuwana dhidhiyo mumafomu akadai seCSV kana kunyange mafaira eSQL. Kugadziriswa kwekugadzirisa kunokwanisika. Iwe unogona kukwanisa kuisa purogiramu yekuchera kwekuunganidza kwako deta. Nemazuva makumi matatu ekuedzwa kwepachena, unogona kuva wakagadzirira kutora data kuongorora pawebsite seji dzemashoko.